‘जात्रा’ वर्तबन्ध, ‘जात्रै जात्रा’ विवाह ! « THE CINEMA TIMES
‘जात्रा’ वर्तबन्ध, ‘जात्रै जात्रा’ विवाह !
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – प्रदीप भट्टराईको निर्देशनमा बनेको सिनेमा ‘जात्रै जात्रा’ एक थरी दर्शकको व्यग्र प्रतिक्षामा छ । भने, अर्को थरी दर्शकले सिनेमालाई लिएर केहि प्रश्न उब्जाएका छन् ।
ट्रेलर रिलिज पश्चात अधिकाँस दर्शकले ‘जात्रा’ र ‘जात्रै जात्रा’मा खासै भिन्नता पाएनन् । र, यी दुई सिनेमामा के चै फरक कुरा छ त ? भन्ने प्रश्न उब्जियो । यो प्रश्नले निर्देशक भट्टराईलाई खोतलिरहेको छ ।
रिलिजको तीन दिन अगाडी पोस्ट-प्रोडक्सनको सबै काम सिध्याएका भट्टराईले लामो सुस्केरा हाल्दै सुनिए ‘पोस्टको काम सबै सकियो । सबै तिरका हलमा सिनेमाको प्रि-टेस्ट पनि गरियो । लगभग प्रचार पनि अन्तिममा पुगेको छ । अब दर्शक प्रतिक्रिया कस्तो आउला भन्ने डर छ ।’
दर्शकलाई अन्तिम आग्रह छ, सिनेमा हेर्न जाँदा सबै नयाँ कुरा पाइने अपेक्षा बोकेर नजानु होला । किनकी, यो ‘जात्रा’को सिक्वेल भएकाले पात्र, हुलिया, पृष्ठभूमि, हाउभाव परिवर्तन गरिएका छैनन् । मात्र ती पात्रले भोग्ने परिस्थिति, ट्वीस्ट फरक छन् । जसले दर्शक बाँधिराख्छ ।’
‘जात्रा’ र ‘जात्रै जात्रा’लाई वर्तबन्ध/विवाहको रुपमा व्याख्या गर्दै उनि अगाडी थप्छन ‘जात्रा’ एउटा घरको वर्तबन्ध थियो । अहिले त्यहि घरमा तिनै पात्र विवाहमा रमाइरहेका छन् । जहाँ गीत बज्छ, पाहुना आएका छन् । जमघट ठुलो भएको विवाह ‘जात्रै जात्रा’ हो ।’ यदि हामीले ‘जात्रा’का अर्ग्यानिक तत्व भुलेको भए ‘जात्रै जात्रा’ सिक्वेल नभएर सिरिज बन्ने थियो । ‘जात्रा’मा छोडिएको २ करोड ८० पैसाको रहस्य खोल्नलाई पनि सिक्वेलको जन्म भएको हो ।’
जेठ ३ गते रिलिज हुने सिनेमामा विपिन कार्की, दयाहाङ राई, वर्षा राउत, रविन्द्र झा, रविन्द्र सिंह बानियाँ लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।